အချဉ်တည် – Everybody Read TChen
Posted on January 19, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆီပျံ, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အချဉ်တည်9 Comments on ချစ်သူငယ်ချင်း ခိုင်မာအောင်အတွက် အိမ်လုပ် ကမ်ချီ နှင့် ပုစွန်ဆီပျံ
စိမ် စိမ် စိမ်…………….
တလောကပေါ့အေတို့ရယ်။ ကျုပ်တို့မှာ မြို့ကြီးပြကြီးရယ်လို့ ရောက်ရှိနေထိုင်နေရပေမယ့် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဓလေ့ကိုတော့ ဘယ်မေ့ပါ့မလဲနော်။ အရင် ရွှေပြည်တော်မှာ (နေပြည်တော်မဟုတ်) မှာ နေခဲ့တုံးက ဒီလိုအချိန် ဆောင်း အကုန် နွေ အကူး လေရူးမြူးတဲ့ နွေဦး ကာစ အခါသမယတွေမှာဆိုရင် တို့တယောက် ဈေးအစုံစုံလှည့် သရက်ကင်း လေးတွေရှာဝယ်ရင်း ဈေးသည်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရတာ သတိရသေးသာပ။
အော်ခုတော့လည်း ရန်ဖြစ်စရာမလိုအောင် သရက်သီးစိမ်းဆိုတာ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ရနေပေမယ့်လဲ ဒီက အသီးတွေက တို့ရွှေပြည်က အသီးတွေလို မွှေးချင်းလဲမရှိ အစေးဆိုတာလဲ နထ္တိ အရသာကျတော့ ဖွယ်တယ်တယ်ရှိ၏ ဆိုသလို (မသိတော့လဲ သေချာမသိပါဘူးအေတို့ရယ် အမောင်လေးပြောတော့ သူတို့ဆီက အသီးတွေက အော်ဂင်းမနစ်ဘူးဆိုလား ဘာလား ကျုပ်တော့ နားမလည်ပေါင်အေ)
ပြောသာပြောရသာပါ ခုတော့လဲမြို့ကြီးပြကြီး အနေကြာလာလို့ သွေးကြီးတာလား ဘာလားတော့ မသိ။ ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးအေ။ တခါတလေတော့ လဲ ငတို့ပြည် ငတို့ရွာက အသီးစိမ်းလေးတွေ တမ်းတမိသား။ အဲ့သဟာနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပေါ့အေ……….
ငတို့ပြည်နဲ့ နယ်ချင်းကပ်နေတဲ့ နေရာက အရီးဒေး တို့ အဖွားဖဲ တို့ အလည်လာကြပါရောလား။ အဲ့သမှာ သတို့ ကို ရွာ ဘက်က အသီးစိမ်းလေး ဘာလေး ပေါ်ရင် ဆွဲခဲ့ကြအေတို့ရယ်ဆိုသော့ ခမျာများလဲ တွေ့တာ ဆွဲခဲ့ပေးကြသာပေါ့။ မရမ်းသီး စိမ်းလေးတွေက စိုမှစို၊ ဒညင်းသီးစိမ်းလေးတွေက လတ်မှလတ် ဆိုတော့ အိမ်က လူကြီးနဲ့ သိုင်ပင်ကြတော့ စိမ်စားကြမယ်ပေါ့။ အဲ့သဟာနဲ့…..တွေ့ကြတဲ့အတိုင်း မရမ်းသီး စိမ်းလေးတွေကို ရေစင်စင်ဆေး၊ နောက် ဗူးထဲမှာ ထည့်၊ ဟော ဆေးသကြားခဲလေးတွေ ကြိတ်ပြီး ထည့် ရေသန့်လေးတွေ ဖုံးရုံ လောင်းပေး နောက်တရက်နှစ်ရက်နေ့တော့ စားရရောပေါ့အေ။ ပြေအာရအုံးမယ် အဲ့ဒီ ဆေးသကြားဆိုသာကလဲ တို့တွေ ရွာမှာနေတုံးက အရပ်ထဲက ကုလားမဆိုင်ဝယ်မလား၊ တရုတ်မ ကုန်စုံဆိုင်ပြေးမလား ပေါလအောရပါ့အေ။ ခုတော့ ဒီမှာ မရှိလို့ အဲ့သည် အရီးဒေး တို့ မဲစောက် ကိုမှာရပါပကောလား။ ပြောပြောချင်ဘုအေ။ ကဲကဲ ပုံတွေကိုသာကြည့်သော့…….
အောက်ကဟာကသော့ မရမ်းသီး စိမ်သာကျပြီး စားလို့ရတဲ့အခါ သို့စားဖို့ အိမ်က ဟာကြီးဖျော်တဲ့ ငရုတ်သီးပေါ့အေ။ ငရုတ်သီးအကြက်မှုန့် ဒင်းကြမ်းနဲ့ ပုစွန်ခြောက်မှုန့် ငံပြာရည်နဲ့ အချိုမှုန့် နည်းနည်းထည့်သယ်။ သူတို့ နယ်ဘက်ကပေါ့အေ။ နောက် ငရုတ်သီး မှုန့် ကျအောင်တညနပ်လိုက်ရင် ရေးရင်းဘတ်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲက သွားရည်ကျအောင်လွှတ်ကောင်းပေါ့အေ
အောက်ဆုံးဟာကတော့ အိမ်သား လုပ်တဲ့ ဒညင်းသီး ဆားရည်စိမ် သူကတော့ သော်သော်ကြာမှစားရသယ်။ ပုံမှာပါတဲ့ ရက်စွဲကနေ စိမ်လိုက်သာ မနေ့တနေ့ကမှ ကျက်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကြတော့။
ကောင်းတာတော့ ကောင်းတယ်အေ ဒညင်းသီးလေးတွေက နုတော့ ကြွပ်ဆတ်ဆတ်နဲ့
ဆီပျံဟင်းလေးနဲ့ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ကုန်းလွှေးလိုက်ရရင်တော့လား…………..အညာက အရီးတားတို့ အရီးကွမ်တို့ အဖွားလေး သူသူ တို့ အကုန်မေ့သွားမယ်
Posted on March 22, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အချဉ်တည်9 Comments on စိမ် စိမ် စိမ်…………….
တနေ့ က မနက်စောစော နိူးတော့ ဈေးသွားဝယ်ပါတယ် ဈေးထဲမှာ မုန်ညှင်းကြီး (လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်) လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေတွေ့တာနဲ့ ရေမုန်ညှင်းချဉ် (တီတို့ အခေါ်) ချဉ်စားဖို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။ သူက စားရတာ အရမ်းလွယ်တယ် အဆင်ပြေတယ် စားကောင်းတယ် တီ့မိုတိုနဲ့ အကိုက်ပဲ လုပ်ရတာလဲမခက်ဘူး ရန်ကုန်မှာနေတုံးက အမေတို့ အဒေါ် တို့ လုပ်တာ ခဏခဏ မြင်ဘူးတယ် အဲ့တော့ တီလဲ လက်တည့်စမ်းကြည့်မယ် စိတ်ကူးပြီးတော့ ဝယ်လာတယ်။ တခါမှ လက်တွေ့မလုပ်ဘူးတဲ့ အတွက် အမေ့ကို ဖုန်းနဲ့ လုပ်နည်း လှမ်းမေးလိုက်သေးတယ် (တွေ့တယ်နော် စာဘတ်သူတွေ ကို ဘယ်လောက်စေတနာ ထားသလဲဆိုတာ တကူးနဲ့တက ကို ဖုန်းခ ကော ဘာကော အကုန်အကျခံပြီးတော့ ကို စိတ်ပါလက်ပါ ချက်ပြုတ် လက်သုပ် အကုန်လုပ်ကျွေးနေတာ) အပင်ကိုတော့ တွေ့ရင် သိမှာပါ ဒီအပင်က ကြံမဆိုင် ချဉ်တာလဲ ဒီအပင်ပဲ သုံးတယ်။ နောက် ရှမ်း မုန်ညှင်းချဉ် ပိုးတီတွေ မုန်လာဥ နီတွေ နဲ့ အစပ် အချိုတွေ မှာ လဲ ဒီအပင်က ပင်တိုင်ပဲ။ တီတို့ က တော့ မုန်ညှင်းကြီးလို့ ခေါ်တယ် သူ့ချည်းပဲ အစိမ်းကြော်လို ကြော်စားရင်လဲရတယ် ခါးတော့ နည်းနည်းခါးတယ် အဲ့လိုကြော်စားရင်………အရွက်က ဖားဖား ကြမ်းကြမ်း ကြီးတွေပါ သေသေချာချာ အနီးကပ်မြင်ချင်ရင် ပုံမှာ ကလစ်လိုက်ပါနော် ပုံကိုလဲ သေချာမြင်ရအောင် တပင်တည်း ရင်ထဲကနွယ် လို သေချာ ထုတ်ပြီး ရိုက်ပြထားတယ်နော် ….
ဒါက ဝယ်လာသမျှပါ ၃ ကီလို ဆိုတော့ တီက အများကြီးထင်တာ ဘယ် နေလှမ်းပြီးတော့ ကျုံ့သွားတာနဲ့ နည်းနည်းလေးပဲ ရတယ်… အဲ့တော့ အပင်တွေ့လို့ ချဉ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် များများ ဝယ်ပါလို့ ပထမဆုံး ဝယ်လာတဲ့ အပင်တွေ ကို ရေသေချာ ဆေးပါတယ် တီကတော့ အပင်ကြီးကနေ တရွက်ချင်း ခွာခွာပြီးတော့ သေချာ ရေဘုံဘိုင်အောက်မှာ တရွက်ချင်း ပွတ်ဆေးပါတယ် ပြီးတော့ ပုံ၂ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ခြင်း၊ ဇကာ ထဲသေချာ စီထည့်ပြီးတော့ (သေချာ စီထည့်စရာတော့လဲ မလိုပါဘူး အပိုလုပ်တာတော့လဲမဟုတ်ပါ ဘာပဲ လုပ်လုပ် သေသေချာချာ သပ်သပ် ရပ်ရပ် စေ့စေ့စပ်စပ် လုပ်တတ်တာ က အကျင့်ပါနေလို့ပါ) ပြီးတော့ နေလှမ်းပါတယ် တနေ့လုံးနီးပါးပါပဲ ပြီးရင်တော့ ညနေကျရင် တနေ့လုံးနေပြထားလို့ နွမ်းနေတဲ့ မုန်ညှင်းရွက်တွေ ကို ပုံ ၃ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းတွေ့ရပါမယ် လောင်သွားတဲ့ အထိ လှမ်းရတာ မဟုတ်ဘူးလေနော် နွမ်းရုံပဲ…
ပြီးရင်တော့ အောက်က ပုံ ၄ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း နွမ်းနေတဲ့ မုန်ညှင်းလေးတွေကို တရွက်ချင်း သေချာထပ်ထပ်ပြီးတော့ ပါးပါး အနေတော်လေးတွေ လှီးပါတယ် ပြီးရင် ဘေးက ပုံ ၅ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဇလုံ သို့ ဇလား နယ် လို့ ကောင်းရုံထဲ ထည့်ပါတယ် ပြီးရင် ပုံ ၇ မှာ ပြထားသလို ဆားလေးတွေထည့်ပါမယ် ဆားထည့်တဲ့ အခါ အများကြီး ထည့်စရာမလိုပါဘူး ဟင်းချက်ရင် ထည့်သလောက်ပါပဲ …
အရွက်တွေ အကုန် ညီညီညာညာ နွမ်း ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ထမင်းကြမ်း ကို ချေပြီး ထည့်ပေးပါ တချို့တွေ က ထမင်းရည် (ထမင်းတည်တုံး ခံထားပြီးတော့ အအေးခံပြန်ထည့်တာပါ) တချို့ကလဲ ဆန်ဆေးရေ စသဖြင့် လုပ်နည်း အနည်းအများ ကွဲတတ်ပါတယ် တီတို့ကတော့ လွယ်ကူသက်သာ မြန်ကောင်း အရသာရှိဆိုတဲ့ မိုတို နဲ့အညီ အလွယ်နည်းပါပဲ ထမင်းကြမ်းတွေနဲ့ နှပ်အောင် နယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အလည် ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘူး နဲ့ ထည့်ပါ တီက အစက အများကြီး ရမယ် ထင်ပြီး ဘူး အကြီး ထုတ်ထားတာ မှန်းချက်နဲ့ မုန်ညှင်းထွက် မကိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ် တဝက်တောင် မပြည့်ချင်ဘူးရယ်….
ထားပါ ခုမှတော့ ပြောနေလဲ အပိုပေါ့ စာဘတ်သူသာ အရွက်တွေ့လို့ လုပ်စားမယ်ဆိုရင် တီ့ လို ၃ ကီလိုပဲ မဝယ်နဲ့နော် အနည်းဆုံး ဟော်လစ် တပုလင်းစာလောက်လိုချင်ရင်တောင် ၅ ကီလိုတော့ ဝယ်ပါ (သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားနော် ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတာ နားထောင်) နယ်ပြီးသားတွေ ကို ဘူးထဲ ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်ကနေ ဆားနည်းနည်း ထပ်ဖြူးပေးပါမယ် ဆား ထည့်တာ များ ရင် မကောင်းသလို နည်းလွန်းရင်လဲ မချဉ်ဘဲ နေတတ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ ရေကျက်အေး ဖြစ်ဖြစ် (တီကတော့ ရေသန့်ပဲ သုံးလိုက်တယ် အလွယ် အလွယ် ….) ကို အရွက်ဖုန်း ရုံလေး ထည့်ပေးပါ နောက်ဆုံး ပုံကို ကြည့်ပါနော်
အစကတည်းက ဘာမှ မထည့်ပဲ ပလိမ်း ချဉ်ထားတဲ့ အတွက် စားခါနီးကျရင် ငရုတ်သီး စိမ်း ပါးပါးညက်ညက် လှီး ပြီး ထည့် နံနံ ပင် ထည့် နောက် ဆား အချိုမှုန့် နည်းနည်း ထည့်ပြီး နယ်လိုက်ရင် ထမင်း နဲ့ အအီပြေ စားစား ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့စားစား ရှမ်းမြီးရှည် လို့ ခေါ်တဲ့ ခေါက်စဉ့် နဲ့စားစား အင်မတန် အရသာရှိ လုပ်ရတာ လွယ်ကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန်စားရ သက်သက်သာသာနဲ့ အကုန်အကျမများတဲ့ ရေမုန်ညှင်း ချဉ် ရပြီပေါ့ကွယ်….
Posted on January 26, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အချဉ်တည်18 Comments on မုန်ညှင်းချဉ် ချဉ်ကြမယ်